October 22, 2020 - Padaethar
22.10.2020 မှ 28.10.2020 အထိ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
October 22, 2020 by Padaethar
22.10.2020 မှ 28.10.2020 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ယခုကာလအတွင်း သင်သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများဖြင့် အကျိုး ပေးမည်။ မိတ်ကောင်း၊ ဆွေကောင်း တိုးပွားခြင်းများရှိမည်။ လုပ်ငန်းကြီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်း များ ပေါ်ထွက်လာမည်။ အိမ်နီးနားချင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စကားများရခြင်း၊ အမှုအခင်းဖြစ်ရခြင်း၊ စိတ်ညစ်ရခြင်း များရှိမည်။ အတတ်နိုင်ဆုံး မိမိစိတ်ကို အေးအေးဆေးဆေး ထားပါ။ စိတ်မြန်မှု၊ ဒေါသကြီးမှုများကြောင့် အမှားများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပြီး ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပါက ဌာနအတွင်း အဆင်ပြေမည်။ ဝင်ငွေလည်း အထူးကောင်းလိမ့်မည်။ထို့အပြင် အင်္ဂါသားသမီး တစ်ဦးဦးထံတွင် ငွေကြေးရင်းနှီးမြှပ်နှံထားခြင်း၊ အပ်နှံထားခြင်းများ ရှိပါကလည်း ဆုံးရှုံးတတ်သည်ကို အထူးသတိပြုရသင့်ပါသည်။ မိမိအတွက် အရေးကြီးကိစ္စ … Read more
အမျိုးသားတွေ သူတို့ မိန်းကလေးကို တကယ်ချစ်မှသာ လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမူတွေ
မိန်းကလေး အများစုဟာ သူတို့ ချစ်သူ က သူတို့ကို သိပ်မချစ်ဘူး ၊ ဂရုမစိုက်ဘူး ၊ အချစ်တွေလျော့ကုန်ပြီ ပြောင်းလဲသွားပြီ စသဖြင့် ထင်လေ့ရှိကြတယ် ။ ဒါဆိုရင်တော့ မှားမှာပေါ့ ကောင်မလေး ရယ်… တို့ ယောက်ျား တွေက မိန်းကလေး တွေလို နုနုရွရွ အသေးစိတ် စိတ်ခံစားချက်တွေကို မဖော်ပြတတ်ပေမယ့် သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ အသည်းနှလုံးကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ် ။ တကယ်မချစ်ဘူးဆိုရင် ကြာကြာဟန်ဆောင်လို့ မရပါဘူး ။ အများဆုံးကြာ ၂လ ၊ ၃လ ပေါ့ ။ အမျိုးသား နဲ့ အမျိုးသမီး ရဲ့ ကွာဟချက်က အမျိုးသမီး တွေက အရမ်းအသေးစိတ် ဂရုစိုက်တတ်၊ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်ခြင်း နှင့် အမျိုးသား အများစုကတော့ … Read more
( ၇ )ရက် သားသမီး အချစ် ဗေဒင်
တနင်္ဂနွေ သားသမီး အရမ်းချစ်တတ်ပါတယ်။ သို့သော် နှစ်ယောက်ပြိုင်တူ ထားချင်တတ်တယ်။သူတို့ အတွေးကတော့ အချစ် ဆိုတာ တစ်ယောက်ထဲနဲ့ပြီးရမှာလား။ အချစ် ဆိုတာ ပေးလို့ ကုန်သွားတဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာနော် ….လို့ များသောအားဖြင့် ခံယူထားတတ်ကြတယ်။ အခြေအနေပေးရင် တစ်ယောက်ထက်ပိုရတတ် ယူတတ်ပါတယ်။ သူများ အထင်ကြီး လေးစားအောင်ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့စကားပြောပြီးရင်သူတို့ ကို အထင်ကြီးလေးစားသွားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ အပြောတစ်မျိုး အလုပ် တစ်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသား များဆို ဇွတ် အတင်းချစ်ရေးဆိုတတ်တယ်။ အမျိုးသမီး များကျတော့ ပွင့်လင်းတယ်၊ ချစ်သူအတွက်ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ချင်တတ်ကြပါတယ်။ ချစ်သူ အတွက် မိသားစု ကိုတောင်စွန့်လွှတ် အဆက်သွယ်ဖြတ် ရဲတာ တနင်္ဂနွေသမီးတွေပါပဲ ။ တနင်္ဂနွေ သမီး များကျတော့ အစွဲ အလန်းကြီးတတ်ကြပြီး ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့စန်းပွင့်မှုကြောင့် … Read more
“ခရီးသွားကြတဲ့အခါ မှောင်လာရင်ကားပေါ်မှာ ကင်မရာ တွေနဲ့ ဟိုရိုက်၊ ဒီရိုက်မလုပ်မိကြပါစေနဲ့….´´
ဒီအကြောင်းကို ဖြစ်ဖြစ်ချင်းရေးချင်ပေမယ့် တချို့က ကိုယ်Celeဖြစ်ချင်လို့ရေးတယ် ထင်ကြလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်Wallမှာ ဟာသတွေကလွဲရင် ဘာမှမတင်ချင်တာကြောင့် မရေးတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် သတိထားစရာလေးတွေရှိလို့ သတိပေးအနေနဲ့ ပြန်မျှဝေလိုက်တာပါ။ ကိုယ်က တကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့သူဆိုပေမယ့် အများတွေမနစ်နာရအောင် မြို့နာမည်တွေတော့ ထည့်မရေးတော့ပါဘူး။ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်အောင် အလုပ်လေးတွေထားခဲ့ပြီး ကျောင်းတုန်းကသူငယ်ချင်းနဲ့ အထက်မြန်မာပြည် ခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ ရန်ကုန်ကနေ စထွက်ပြီး မြို့တမြို့မှာ တညတည်းကြတဲ့အချိန်ထိ ဘာပြဿနာမှ မရှိသေးဘူး။ မနက်လင်း ခရီးဆက်ထွက်ပြီး ဘော်ဒါက ကားမှာကင်မရာတပ်ဖို့ပြောတော့ ကားမောင်းတဲ့ကောင်လေးက သူ့သူငယ်ချင်းကားမှာကင်မရာတပ်ထားတာ တခါတခါ မကောင်းဆိုးဝါးတွေတွေ့တဲ့အတွက် သူကြောက်လို့ မတက်ဖို့တားတယ်။ အဲ့ချိန်မှာဘဲ ကိုယ်က ညဘက်ကျရင် ဖုန်းကင်မရာနဲ့ စမ်းကြည့်ဖုိ့ အကြံရသွားတယ်။ နာမည်ကြီးဘုရား၁ဆူကို ဝင်ဖူးပြီး အပြန်အိမ်အတွက်လက်ဆောင်ဝင်ဝယ်တယ်။ ဆိုင်ရှင်မိသားစုနဲ့ စကားဆက်မိတော့ ကိုယ်တွေဆက်သွားရမယ့်တောလမ်းက သတိထားစရာ၁ခုရှိလို့ တချို့ကုန်ကားတွေကလွဲပြီး ဘယ်ဘုရားဖူးကားမှ … Read more
ကိုယ်နဲ့ တစ်ညစာပျော်ဖို့ ခေါ်လာတဲ့ အပျော်မယ်လေးကို သူတောင်းစားကိုပေးပြီး ပျော်ခိုင်းလိုက်သောအခါ ဘားတခုထဲကနေ အရက်တွေ အရမ်းကိုမူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် အရက်တစ်လုံး နဲ့ ညည့်ဌက်ကလေးတစ်ယောက် ဆွဲပြီး ထွက်လာသတဲ့…. အဲ့ဒီမှာပဲ ဘားအရှေ့မှာ တောင်းရမ်း စားသောက်နေတဲ့ သူတောင်းစား တစ်ယောက်က ဗိုက်အရမ်းဆာနေတဲ့အတွက်ကြောင့် … သူ့ကို အစားစားဖို့ ငွေစကြေးစ အနည်းငယ်လောက် စွန့်ကြဲဖို့ အမူးသမားကို တောင်းရမ်းပါတော့သတဲ့…. အဲ့ဒီမှာပဲ အမူးသမားကလည်း ငါ့မှာ ပိုက်ဆံတော့ မကျန်တော့ဘူး… မင်း သောက်ချင်ရင်တော့ ရော့..ငါ့ အရက် သာ သောက်လိုက်တော့လို့ အရက်ပုလင်း လှမ်းပေးရော… အဲ့ဒီမယ် သူတောင်းစားက (ကျွန်တော် အရက် မသောက်တတ်ပါဘူးခင်ဗျ ..ထမင်းစားဖို့ ငွေသာလိုတာပါ) လို့ ပြန်ပြောသတဲ့….. ဟာ….အဲ့ဒါဆိုလည်း ရော့ကွာ..ငါ့ ဆေးလိပ်ဗူး. … Read more
အမျိုးသမီးတွေ အပျို ရင်သား နဲ့အအို ရင်သားတို့ကွာခြားချက်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုတာနဲ့ သဘာဝတရားက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရဲ့ ရင်သားကို ပြုပြင်ပါတော့တယ်။ သည်အခါမှာ ရင်သားဟာ မူလကထက်လည်း ကြီးထွားလာပါတယ်။ အလေးချိန်အားဖြင့် တစ်ဖက်ကို တစ်ပေါင် နှုန်းလောက်အထိတောင် ကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ အဆိုရှိတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာ အဲသလို ရင်သား ကြီးထွားလာလို့ ရင်သားမှာ အကြောပြတ်သလို အရာမျိုးတွေ ရှိလာတတ်တယ်။ (အပျိုပေမယ့် ဝလွန်း၊ ရင်သား ထွားလွန်းရင်လည်း အလားတူပဲ အကြောပြတ်တတ်တာကို သတိချပ်ကြစေလိုပါတယ်။) ဒါ့အပြင် ရင်သားများဆီကို သွေးပို့လွှတ်မှုကလည်း တိုးပွားလာတဲ့အတွက် ရင်သားပေါ်က သွေးကြောတွေရဲ့ အရောင် ပိုရင့်လာသလို မြင်လည်း ပိုမြင်သာလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နို့သီးခေါင်း အောက်ခြေက အမည်းဝိုင်းကလည်း အရောင် ပိုရင့်ပြီး နက်မှောင်လာပါတယ်။ ကလေးအနေနဲ့ မအေ့နို့သီးခေါင်းကို အလွယ်တကူ တွေ့နိုင်အောင် သဘာဝတရားက ဖန်တီးလိုက်တာပါ။ ကိုယ်ဝန် သုံးလကနေ … Read more